Hay'adaha Xuquuqul aadanaha oo Somaliland si kulul u Eedeeyay
HomeWararka SomaliyaSomalilandHay’adaha Xuquuqul aadanaha oo Somaliland si kulul u Eedeeyay
Hay’adaha Xuquuqul aadanaha oo Somaliland si kulul u Eedeeyay
October 5, 2021 Somaliland, Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Hay’addaha arrimaha bini’aadantinimada ka shaqeeya ayaa aad u cambaareeyay xarigga iyo barakicinta khasabka ah ee in ka badan 1,000 qof oo isugu jira haween, carruur iyo rag, kuwaas oo ay Somaliland kasoo barakacisay magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka Sool.
Wada hawlgalayaasha bani’aadamnimada ayaa sheegay in ay isku –dubbaridayaan qiimeyn bani’aadamnimo oo deg -deg ah, si loo dejiyo tirada dadka ay dhibaatadu saameysey, baahidooda degdegga ah, iyadoo lala kaashanayo maamulka Puntland, si loogu helo hoy ku-meelgaar ah.
“Waxaan aad uga walaacsannahay warbixinnada barakac khasab ah oo la qorsheeyay maalmaha soo socda. Waxaan ugu baaqeynaa hay’adaha samafalka inay bixiyaan oo dedejiyaan gargaarka degdegga ah, iyadoo lala kaashanayo maamulada maxalliga ah, si loo helo xal waara,” ayaa lagu yiri bayaan kasoo baxay hay’adda isku-daridka gargaarka QM ee UNOCHA,
UNOCHA ayaa ku boorisay Somaliland in ay si taxaddar leh u dhaqmaan oo ay helaan xal waara oo lagu xushmeynayo xuquuqda iyo sharafta dhammaan dadka ay dhibaatadu saameysey.
Dadka sida khasabka ah looga barakicinayo Laascanood, ayaa halkaas ku noolaa muddo ku dhow 20 sano. Waxayna hadda u nugul yihiin cawaaqib xumada ka dhalan karta xaaladdahooda bani’aadamnimo.
Galmudug oo war ka Soo saartay jarista Dhirta (Akhriso)
Dhageyso Ciladii ku timid Baraha Bulshada oo saamaysay Dad tiradoodu ay gaarayso 10.6 milyan qof oo ku kala sugan guud ahaan caalamka